सरकारी अस्पतालमा लागेको ताला हेरेपछि बिरामीको गुनासो- गरीबले मर्नुको विकल्प रहेन !
विराटनगर – कोशी अञ्चल अस्पतालको ओपीडी सेवा चार दिनदेखि बन्द हुँदा अस्पतालमा पुगेका बिरामीलाई सास्ती भएको छ । उपचार गर्न आएका बिरामी अस्पतालमा लगाएको ताल्चा हेदै फर्किन बाध्य छन् ।
सरकारी सेवा सुविधामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिने आशामा अस्पताल आइपुग्ने बिरामी पछिल्लो चार दिनदेखि उपचार नै नपाएर फर्कनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
कोशी अञ्चल अस्पतालको ओपीडी सेवामा पुगेका बिरामीहरू डाक्टरलाई भेट्नै नपाई फर्कने गरेका छन् । सोमबारदेखि ठप्प रहेको अस्पतालको ओपीडी सेवाको मुख्य प्रवेशद्वार बाहिर नै ताला लगाइएको छ ।
बिहीवार विराटनगर- १३ का वीरेन्द्र मण्डल आफ्नी श्रीमतीलाई उपचार गराउन कोशी अञ्चल अस्पताल पुगेका थिए, तर उपचार नै नगराई फर्कनु पर्‍यो ।
श्रीमतीको मुटुमा पानी जमेका कारण चाँडो उपचार गराउनु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘अब त अस्पतालमा पनि ताला लगाउन थालेछन्, हामीजस्ता गरीबलाई बिरामी परेर अस्पतालमा आउँदा मर्नुको विकल्प रहेन,’ मण्डलले गुनासो पोखे ।
सुनसरीको चिमडीबाट आएकी अस्मिता चौधरी पनि अस्पतालको मूलगेटमा लगाइएको तालाका कारण उपचार नै नपाई फर्कनु पर्‍यो ।
सरकारले अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा राजनीति नगर्न भनेपनि अस्पतालका डाक्टरहरू नै समायोजनको विरोधमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गाेदान) को अगुवाइमा उनीहरू सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कोशी अञ्चल अस्पतालमा विगत चार दिनदेखि ओपीडी सेवा ठप्प छ ।
बिरामीको सेवाभन्दा स्वार्थमा केन्द्रित रहेका सरकारी डाक्टरका कारण दैनिक उक्त अस्पतालमा आइपुग्ने एक हजारभन्दा बढी बिरामी मर्कामा परेका छन् ।
डाक्टर रञ्जु देव केन्द्रको निर्णयअनुसार नै आन्दोलन गरिएको बताउँछिन् । बिरामीलाई सास्ती दिन रहर नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आफुहरूको माग नसुन्दा यो अवस्था आएको जिकिर डा. देवले गरिन् ।
कोशी अञ्चल अस्पताका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रोशन पोखरेल बिरामीलाई ओपीडीको बाहिरै बसेर भए पनि उपचार सेवा दिएको दाबी गर्छन् ।
आन्दोलनका कारण अस्पतालले दैनिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घाटा व्योहोर्दै आएको उनले बताए ।
एकातिर बिरामीले सास्ती खेपिरहेका छन् भने अर्कोतिर अस्पतालले घाटा व्योहोर्नुपरिरहेको छ ।
चैत २९, २०७५ मा प्रकाशित
ज्वरो आउँदा कसरी गर्ने स्वास्थ्यको हेरचाह ?
सर्पले डसेका बिरामीको चाप बढ्यो विराटनगर- विराटनगरस्थित प्रदेशिक अस्पताल (कोशी)मा सर्पले डसेका बिरामीको चाप बढेको छ । अविरल वर्षापछि आएको बाढी र डुबानका कारण विगत १५ दिनयता सर्पले डसेका बिरामीको चाप अस्...